Ceni: “Ampy ny tetibolan’ny fifidianana depiote” | NewsMada
Ceni: “Ampy ny tetibolan’ny fifidianana depiote”
“Ampy ny tetibola 32 miliara Ar izay voasoratra ao anatin’ny tetibola hikarakarantsika ny fifidianana solombavambahoaka. Etsy ankilany, ny ao anatin’ny tahirim-bola Sacem iarahana amin’ny fiombonambe iraisam-pirenena.” Io ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny fiatrehana ny fikarakarana fifidianana solombavambahoaka hatao amin ’ny 27 mey ho avy izao.
Ny tombony ananana amin’izao, raha oharina tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika teo: lisi-pifidianana vaovao no hiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka. Tombony ihany koa ny traikefa ananana. Efa hita ireo lesoka tokony harenina tamin’ny fikarakarana fifidianana nandritra ny fifidianana filohan’ny Repoblika indro nihodina teo.
Ankoatra ireo, eo koa ny mety ho fanatsarana ny lalàm-pifidianana. Efa nanolotra soso-kevitra miisa 15 ho fanitsiana sy fanovana ny lalàm-pifidianana ny Ceni. Mba hananana lalàm-pifidianana tena hahazoana mikarakara fifidianana madio sy mangarahara ny eto anivon’ny Ceni amin’izany. Miankina amin’ny governemanta izay.
Malalaka ny firotsahan-kofidina
Afa-mirotsa-kofidina amin’ny anaran’ny antoko politika na vondrona antoko politika, na afa-mirotsaka amin’ny anaran’ny tenany manokana ny tsirairay, raha ny fanazavany ny amin’izay mahazo mirotsa-kofidina ho solombavambahoaka.
Tsy misy amin’izany ny fiantohan’ny antoko na vondrona politika amin’ny firotsahan-kofidina toy izay natao tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ny kandidà, mahafeno ny fepetra maha mpifidy: voasoratra amin’ny anarana amin’ny lisi-pifidianana amina fari-pifidianana iray eto amin’ny firenena izany.
Tsy maintsy monina eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara koa ny kandidà, feno 21 taona katroka farafahakeliny amin’ny vanin’andro hanaovana ny latsa-bato, ary mizaka ny zo isam-batan’olona sy ny zo ara-politika rehetra.